My freedom: Update & Some Advice
Update & Some Advice
ပျောက်နေတာကြာပြီနော်။ ပျောက်ဆို အလုပ်က တက်ခိုင်းထားတဲ့ Clinical သင်တန်းရဲ့ ပထမနှစ် စာမေးပွဲတစ်ခုရှိလို့ စာလုပ်နေရတာနဲ့ စာမရေးဖြစ်တာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့ကပဲ စာမေးပွဲပြီးတယ်။ Result လည်း ထွက်ပြီ... 96.2% နဲ့ အောင်တယ်။ ပျော်တာ။ တော်တော်များများက ကန်ဒီ့ကို စာကြမ်းပိုးထင်ကြတယ်။ အမှန်က အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ ငယ်ငယ်ကလည်း အရမ်းတော်တဲ့ကျောင်းသူထဲမှာ မပါဘူး။ တစ်ခုရှိတာက ကန်ဒီစိတ်ဝင်စားတာမျိုးဆို ကန်ဒီစိတ်ပါလက်ပါလုပ်တယ်။ ဥပမာ.. ဒီလို Clinical Pharmacology ပိုင်းဆို ကန်ဒီစိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျောင်းတက်ကတည်းက ကန်ဒီ့အကြိုက်ဆုံးဘာသာပဲ။ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်း ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ အလုပ်မှာတာဝန်ယူရတာလည်း Clinical ပိုင်း ဖြစ်နေတော့ ပိုကံကောင်းတာပေါ့နော်။
အလုပ်အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ အားလုံးကို Update လုပ်စရာလေး ရှိသေးတယ်။ နောက်ထပ် အပြောင်းအလဲတစ်ခုပေါ့နော်။ နောက်အပတ်ကစပြီး ကန်ဒီအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ Polyclinic Branch ကို ပြန်သွားရမယ်။ အခုကန်ဒီလုပ်နေတဲ့ အသစ်ဖွင့်မယ့် Branch ကို မသွားဖြစ်တော့ဘူး။ ကြားထဲမှာ Management ဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပြီး ကန်ဒီ့အရင် Pharmacy Manager က ကန်ဒီ့ကို ပြန်ခေါ်တယ်။ ပြန်ခေါ်တယ်ဆိုတာ မေးတာပေါ့နော်... ကန်ဒီ့ကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ "Candy.. Is it ok if I pull you back? We need some senior staff here. I need you to help me with Clinical Training too." လာမယ့် (၂၀၁၇)ဇူလိုင်မှာ အသစ်ဖွင့်မယ့် Polyclinic Branch အတွက် လူတွေခွဲတဲ့နေရာမှာ တော်တော်များများက အသစ်ဖွင့်မယ့်ဆီ (ကန်ဒီလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့နေရာ) သွားချင်ကြတယ်။ အသစ်ဆိုတော့ အလုပ်လည်းပါးတယ်။ အလုပ်အရမ်းမရှုပ်ဘူးပေါ့။ ၀န်ထမ်းအသစ်တွေကို Training ပေးဖို့လည်း အချိန်သိပ်မရှိတဲ့အခါ ၀န်ထမ်းအသစ်ထက် ၀န်ထမ်းအဟောင်းတွေ များတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်တော့ နဂို Branch အဟောင်းမှာ Senior Staff တွေ တော်တော်နည်းသွားတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ကန်ဒီ့ကို ပြန်ခေါ်တယ် ဆိုပါတော့။ ကန်ဒီကလည်း လက်ခံလိုက်တယ်။ ရတယ်... ပြန်လာမယ်ပေါ့။
ကန်ဒီ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တော်တော်များများက အံသြကြတယ်။ ဘာလို့လဲပေါ့... ဘာလို့ဒီလောက် သက်သက်သာသာနေရတဲ့နေရာမှာ မနေဘဲ ပြန်သွားချင်တာလဲပေါ့။ သူတို့ပြောတာလည်း လက်ခံပါတယ်။ အသစ်မှာနေရင် သက်သာမယ်။ အဟောင်းကိုပြန်သွားရင် အလုပ်အရမ်းရှုပ်မယ်၊ ပင်ပန်းမယ်။ အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်ရင်တောင် လူနာတွေများရင် မပြန်နိုင်ဘူး။ လောလောဆယ် Polyclinic အသစ်က တနေ့လူနာ (၁၅၀)ယောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အဟောင်းက တနေ့လူနာ (၁၀၀၀)ကျော်တယ်။
ကန်ဒီကလည်း တခါတလေ Challenge လုပ်ရတာကို ပိုသဘောကျတယ်။ Polyclinic အသစ်မှာအခုလုပ်နေတာ သက်သာတာ မှန်ပေမယ့် Knowledge ပိုင်းအရ ဘာမှတိုးတက်မှု သိပ်မရှိဘူး။ လူနာနည်းတော့ ထူးထူးခြားခြား Case တွေ သိပ်မရှိဘူး။ ကိုယ်သင်ယူနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးနည်းတယ်။ အရင် Branch မှာဆို လူနာအရမ်းများတော့ တနေ့တနေ့ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ သင်ယူနေရတာပဲ။ နောက်တစ်ခုက ကန်ဒီ့ Clinical Training ပိုင်း... အရင် Branch မှာ ကန်ဒီက Trainer... ၀န်ထမ်းအသစ်တွေ ကျောင်းသားတွေကို Clinical ပိုင်းတွေ Train လုပ်ရတယ်။ အခုလုပ်နေတဲ့နေရာမှာကျ Polyclinic အသစ်ဆိုတော့ ၀န်ထမ်းအသစ်လည်း မရှိဘူး.. ကျောင်းသားလည်း မရှိဘူး။ ဆိုတော့ ကန်ဒီ့ Training Skill တွေ ကျတယ်။ ကိုယ်က သူတပါးကို Train လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်က အကုန်သိအောင် အရင်လေ့လာရတယ်။ အဲ့တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်း အကျိုးရှိတယ်။
အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့် ကန်ဒီအရင် Branch ကို ပြန်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။ ကန်ဒီ့ကို ပြန်ခေါ်တဲ့ Pharmacy Manager ကလည်း ကန်ဒီပြန်လာရင် လုပ်ရမယ့် Clinical Training ပိုင်းတွေကို ပြန်လာတာနဲ့ ပြောပြမယ် ပြောတယ်။ အဲ့က ကန်ဒီ့ အရင် Supervisor Pharmacist က ကန်ဒီပြန်လာမှာကို ဘယ်လိုကြိုဆိုတယ် မှတ်လဲ.. "Are you ready to come and die here?" တဲ့... ဟဟဟ။ ဟုတ်တယ် အခုအဲ့ဒီမှာ ၀န်ထမ်းအသစ်တွေ အရမ်းများပြီး သိပ်မနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီ Supervisor ကလည်း ကန်ဒီ့ကို တွေ့တိုင်းညည်းတယ်။ အခုတော့ သူ့မှာ သေဖော်သေဖက်ရသွားလို့ ပျော်နေတဲ့ပုံ... "When you come back, you will see. You will shake your head!" တဲ့။ ကဲ.. အဲ့ဒါသာကြည့်။
ကြုံတုန်းလေး ဆရာမကြီးလုပ်ပြီး လေနည်းနည်းပေါလိုက်ဦးမယ်။ ကန်ဒီ့စာဖတ်သူတွေထဲမှာ ကန်ဒီ့ထက်ငယ်တဲ့ လူငယ်တွေလည်း ရှိနိုင်လို့လေ။ ကိုယ့်အလုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုခုကို လေ့လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သိချင်တဲ့စိတ် (Curiosity) ရှိဖို့ အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အဲ့ဒါမှ တိုးတက်မှာ။ ဥပမာပေးမယ်နော်.. ဥပမာ ဒီဆေးနဲ့ ဒီဆေးတွဲမပေးသင့်ဘူးဆိုပြီး Senior တစ်ယောက်ယောက်က ထောက်ပြလိုက်တယ်ဆိုပါစို့.. "Oh.. Ok, noted" ဆိုတာမျိုးနဲ့ မပြီးသွားဘဲ ကိုယ်က"ဘာလို့လဲ"ဆိုတဲ့ သိချင်တဲ့စိတ်ရှိမှသာ တိုးတက်မှာ။ ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အဖြေကိုလည်း ထောက်ပြတဲ့သူကိုပြန်မေးဖို့ထက် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာဖွေလိုစိတ် ရှိရမယ်။ "I will find out why!" ဆိုတာမျိုး.. ပြီးရင် ကိုယ်ရှာလို့ရလာတဲ့အဖြေကို ပြန်ပြောပြီး ပြန် Discussion လုပ်တာမျိုး။ ဒါကန်ဒီ အလုပ်မှာ Learn လုပ်တဲ့ ပုံစံကို ပြောပြတာ။ သူများကို မေးပြီးရလာတဲ့ အဖြေထက် ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပြီးရလာတဲ့အဖြေက ခေါင်းထဲပိုစွဲတယ်။
ဆောရီးနော်.. အလုပ်အကြောင်းတွေ ပြောပြတာ နည်းနည်းရှည်သွားတယ်။ စာမရေးတာလည်း ကြာတော့ ပြောစရာတွေ များနေတယ်လေ။ လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ အဖေနဲ့အမေပြန်မယ်။ လေဆိပ်လိုက်ပို့ရမယ်.. ပြီးမှ စာသင်ဖို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတန်းသွားမယ်။ မနက်ဖြန် အမေ့ကို Bugis လိုက်ပို့ရမယ်။ သူဝယ်ချင်တာလေးတွေ ၀ယ်ရအောင်လို့။ တူလေးအတွက် မုန့်တွေ ၀ယ်ပေးလိုက်တယ်။ အခုဆို အရမ်းစား ဆိုပဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေက စာလုပ်နေတာနဲ့ တချို့မေးထားတဲ့ Comment လေးတွေကို မကြည့်မိဘူး။ ဒီနေ့မှ ပြန်ဖြေပေးထားတယ်နော်။ Reply ကြာသွားလို့ Sorry နော်။
ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်တော့မယ်..
Posted by Candy at 11:16 PM